Vaovao Tsara ho An’ny Tantsambo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Catalan Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Galicienne Grika Géorgien Haoussa Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Javaney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Pendjabi Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tongan Tseky Télougou Valencienne Vietnamianina Xhosa Yorobà
Misy tantsambo 1 500 000 eo ho eo eran-tany. Mifindrafindra seranan-tsambo foana izy ireny. Ahoana àry no hahafahan’ny Vavolombelon’i Jehovah mitory amin-dry zareo? Rehefa misy sambo tonga eny an-tseranana, dia misy Vavolombelona koa tonga eny. Efa nampiofanina hitory amin’ny tantsambo ry zareo. Mangataka ny hitsofoka any anatin’ilay sambo izy ireo, dia mampianatra Baiboly sady mizara boky sy gazety amin’izay fiteny tian’ilay olona itoriany. Iresahany daholo ny polisy sy izay mpiasa ao amin’ilay sambo.
Nisy vokany ve ny ezaka nataon-dry zareo? Hoy i Stefano, Vavolombelona mpankeny amin’ny seranan-tsambon’i Vancouver, any Kanada: “Misy miteny hoe masiaka sy sarotra iresahana be, hono, ny tantsambo. Misy ihany aloha hoatr’izany e! Fa ny ankamaroany anefa tsotra sady tena te hianatra.” Hoy ihany i Stefano: “Mino an’Andriamanitra daholo ny ankamaroan-dry zareo sady te hotahiny, ka matetika no tonga dia mandray anay.” Raha ny tany Vancouver fotsiny, ohatra, dia efa in-1 600 mahery ny Vavolombelon’i Jehovah no nampandrosoana tany anaty sambo, tamin’ny Septambra 2015 ka hatramin’ny Aogositra 2016, ka afaka nitory tao. Boky sy gazety an’arivony tamin’ny fiteny samihafa no voapetraka, ary tantsambo 1 100 mahery no nianatra Baiboly.
Dia ahoana anefa no hanohizana ny resaka?
Misy Vavolombelon’i Jehovah daholo eny amin’ny seranan-tsambo eran-tany. Izay tantsambo mbola te hanohy hianatra Baiboly àry dia afaka mangataka hotsidihina eny amin’izay seranana handehanany manaraka. Hoatr’izany no nataon’i Warlito, lehiben’ny mpahandro sakafo tao amin’ny sambo anankiray mpitondra entana. Tafaresaka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy tany Vancouver, tamin’ny Mey 2016. Naseho azy ilay video hoe Nahoana Ianao no Tokony Hianatra Baiboly?, dia tonga ry zareo dia nianatra Baiboly tamin’ilay bokikely hoe Vaovao Tsara Natao ho Anao! Faly be i Warlito ka mbola tiany hotohizina ilay fianarana. Lavitra be anefa ny seranan-tsambo halehany manaraka satria any Paranaguá, any Brezila, ilay izy.
Iray volana mahery kely, tatỳ aoriana, vao nigadona tao Paranaguá ilay sambo nandehanany. Nisy Vavolombelon’i Jehovah brezilianina anankiroa tonga nitady an’i Warlito tao amin’ilay sambo. Nanavatsava ny lalantsaran’ilay sambo ireo Vavolombelona ireo, sady nanontany hoe iza izany Warlito izany. Gaga be i Warlito tamin’izay! Nohazavain-dry zareo avy eo hoe Vavolombelona namany tany Vancouver, hono, no niteny tamin-dry zareo hoe te hianatra Baiboly i Warlito. Faly be izy sady nisaotsaotra be mihitsy. Mbola hanohy hianatra Baiboly, hono, izy rehefa tonga any amin’izay seranan-tsambo handehanany manaraka.